भारतमा कर्फ्यू : अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द « हाम्रो ईकोनोमी
भारतमा कर्फ्यू : अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानमा आइतबार चलिरहेको जनता कर्फ्यूका कारण भारतमा अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द भएका छन् । प्रहरी, सञ्चार माध्यमका अधिकारीहरु, चिकित्सक र सरसफाइका व्यक्तिबाहेक अरुलाई सामान्य अवस्थामा घर नछाड्न भनिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा राज्यले लगाउने कर्फ्यूभन्दा भिन्न यो कर्फ्यूका कारण ३६ घण्टासम्म कोही पनि बाहिर ननिस्कँदा कोरोना भाइरसको महामारी कम हुने उद्देश्यसहित यस्तो प्रस्ताव गरिएको मोदीले सम्बोधनको क्रममा बताएका थिए ।
के–के बन्द छन् भारतमा ?
कर्फ्यूमा के गर्न प्रतिवन्ध छ ?
जनता कर्फ्यूको दिनमा सबैभन्दा मुख्य कुरा अत्यावश्यक बाहेक कसैलाई पनि घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । यद्यपि अत्यावश्यक सेवा लिनको लागि भने बाहिर जान कुनै रोकतोक छैन ।
एक अर्कालाई भेट्ने, पार्कमा भेला हुने जस्ता काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चियापसलमा हरेक बिहान लाग्ने भीड रोक्न चिया पसल बन्द गरिएको छ । नागरिकहरुलाई समेत अनावश्यक काममा बाहिर नटहलिन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक रुपमा नै प्रहरीले भनिरहेको छ कि उनीहरू घरमा बस्न आग्रह गरिएको हो । तर, काम विशेषले बाहिर जानेहरुलाई पनि कुनै कारबाही गरिने छैन । सामाजिक सञ्जालमा यदि यो दिन घर बाहिर गएको खण्डमा प्रहरीले ११ हजार जरिवाना गराउँछ भन्ने अफवाहको समेत दिल्ली प्रहरीले खण्डन गरेको छ ।